Vovon-tsolika PRL-8-53 (51352-87-5) mpanamboatra - Chemical Phcoker
PRL-8-53 dia simika fikarohana nootropic azo avy amin'ny asidra benzoic sy phenylmethylamine misy vokany manatsara ny fahatsiarovana …….
Rohila PRL-8-53 (51352-87-5) video
Rohamena PRL-8-53 (51352-87-5) Description
Ny roapolo PRL-8-53 roatrama dia singa mpikaroka tsy nitotropika izay azo avy amin'ny asidin'ny benzoika sy phenylmethylamin izay misy fiantraikany amin'ny fahatsiarovan-tena, ampiasaina amin'ny fikarohana momba ny neuroscience mifandraika amin'ny fampitomboana ny fahatsiarovan-tena sy ny fiarovana amin'ny tsy fahampian'ny fahatsiarovan-tena.
Rohamena PRL-8-53 (51352-87-5)pecifications
Product Name Rohamena PRL-8-53
Anarana simika PRL-8053 Powdle PRL-8-53 Methyl 3- (2- (benzyl (methyl) aMino) ethyl) hydrochloride benzoat (3-Benzyl (methyl) aminoethyl) hydroxychlorid methyl ester m- [ Methyl 2- (2- (Benzyl (methyl); Roamic acid (3- (methyl (phenylmethyl) aMino) ethyl) -, methyl ester, hydrochloride; methyl 2- (3- (benzyl (methyl); PRL-2-8 vody (hydrochloride)
Drug Class Ny kilasin'ny Nootropic
molekiolan'ny Formula C18H22ClNO2
molekiolan'ny Wvalo 319.82578
mitsonika Point 149-152 ℃
Solubility Miala amin'ny 25 mM ao Ethanol, Soluble mankany 50 mM ao anaty rano.
Application Ny roapolo PRL-8-53 roatrama dia singa mpikaroka tsy nitotropika izay azo avy amin'ny asidin'ny benzoika sy phenylmethylamin izay misy fiantraikany amin'ny fahatsiarovan-tena, ampiasaina amin'ny fikarohana momba ny neuroscience mifandraika amin'ny fampitomboana ny fahatsiarovan-tena sy ny fiarovana amin'ny tsy fahampian'ny fahatsiarovan-tena.
Fanampin-tsakafo, fanafody, zava-mahadomelina
Ny PRL-8-53 dia fitaovana fanandramana izay maro no mino fa iray amin'ireo mpilalao fanadinana mahomby indrindra azo. Ny anarana feno dia methyl 3- (2- (benzyl (methyl) amino) ethyl) benzoate.
Hitan'ny mpikaroka fa afaka nanatsara ny fisorohana ny fianarana amin'ny voalavo ny PRL-8-53. Nisy fianarana iray natao tamin'ny PRL-8-53 ihany koa. Ny mpandray anjara tsirairay dia nandona plasebo iray sy PRL-8-53, tamin'ny fotoana samihafa, tamin'ny fandalinana jiro roa mivadika. Ny mpandray anjara dia nanao fitsapana fahatsiarovan-tena, izay ahitana teny 12 monosyllabic amin'ny filaharana manokana. Natao in-telo ny fitsapana, vantany vao vita ny famenoana, indray andro aorian'ny famenoana, ary efatra andro aorian'ny famenoana.
Na dia marim-pototra aza ny porofo, dia misy marika mampiavaka ity fitambarana synthétique ity ka afaka manatsara ny fahaiza-mianatra sy ny famolavolana fahatsiarovana.
PRL-8-53 powder (51352-87-5) Mekanisma amin'ny asa?
Ny mombamomba ny prl-8-53 dia tsy fantatra ankehitriny. Mety hampitombo ny asan'ny acetylcholine ny atidoha, zava-dehibe ho an'ny fianarana sy ny fahatsiarovana ny neurotransmitter.
Ankoatr'izay dia mety hampitombo ny dopamine dopamine ny voly Prl-8-53, izay afaka manatsara ny fahatsiarovan-tena, ny antony manosika ary ny fampihenana ny reraka. Mety hanakana ny famokarana serotonina izany, izay mety hampitombo ny ahiahy, ny fahaketrahana ary ny tsy fahitan-tory.
soa of PRL-8-53 powder (51352-87-5)
Prl-8-53 Afaka manatsara fahatsiarovana
Ny Prl-8-53 dia manatsara ny fampiasana kognitive
soso-kevitra PRL-8-53 powder (51352-87-5) Dosage
Ny dosage nampiasaina tamin'ny fandalinana olombelona dia ny 5 mg vovoka Prl-8-53 nomena tamin'ny ampahany iray am-bava.
Araka ny mpampiasa Prl-8-53, ny doses eo anelanelan'ny 10 sy 20 mg dia nahomby sy nandefitra.
Ny fandinihana ny toekitety amin'ny raty dia maneho fiheverana avo lenta amin'ny LD50, nefa mazava ho azy fa ilaina ny porofo hafa. Ankoatra izany, toa ny mety ho vokatry ny PRL-8-53 dia fihenan'ny fiasan'ny motera ao amin'ny atidoha.
Tamin'ny fitsapana olona tokana ny vovony Prl-8-53, ny fatra kely 5 mg dia tsy niteraka voka-dratsy. ‍‍
Ibutamoren Mesylate (MK677) vovoka